You are at:Home»Life Style»Category: "Relationship" (Page 2)
ချစ်သူနဲ့ ချစ်သက်တမ်း နှစ်ပတ်လည်နေ့တွေမှာ ဘာလုပ်သင့်လဲ?
မိန်းကလေးတိုင်းဟာ ကိုယ့်ချစ်သူဆီကနေ အမှတ်တရနှစ်ပတ်လည်နေ့တွေမှာ အံသြပျော်ရွင်မူတွေလိုချင်တာ သဘာဝပါပဲ။ အဲ့ဒီလို အမှတ်တရနေ့လေးတွေကို မေ့နေတတ်တဲ့ ကိုကိုတွေကိုတော့ မိန်းကလေးတွေက သိပ်မကြည်ပါဘူး။ အမှတ်တရနေ့လေးတွေမှာ နှစ်ကိုယ်တူ အမှတ်တရဖြစ်အောင် ဘာတွေလုပ်မလဲ…
တကယ်ချစ်ပြီဆိုတဲ့ ကိုကိုတွေ ပြတတ်တဲ့အပြုအမှုတွေ
ယောကျာ်းဆိုတာဟာ တစ်ခါတစ်ရံမာယာများပြီး မိန်းမတွေအတွက်တောင် ဟန်ဆောင်ကောင်းတတ်ကြပါတယ်။ ချစ်ဟန်ဆောင်ရာမှာလဲ အတိုင်းထက်အလွန်ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကိုကိုတွေက သင့်ကိုတကယ်ချစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ဒီလိုအပြုအမူလေးတွေကိုပြတတ်ကြပါတယ်။
လူစိတ်ဆိုတာ တကယ်ကိုခန့်မှန်းရခက်ပြီး ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်တဲ့အရာပါ။ လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေဆိုသလို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအကြိုက်လဲမတူပါဘူး။ မိန်းကလေးအများစုသဘောကျတတ်တဲ့ ကိုကိုတွေဆိုတာ…
Crush ကိုဘယ်လိုချဉ်းကပ်မလဲ ?
“ချစ်တယ်၊ မုန်းတယ်”ဆိုတာ တကယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဖို့ခက်တဲ့ စကားလုံးတွေပါ။ ချစ်ခြင်းဆိုတာကလည်း အင်မတန်ဆန်းကြယ်လှပပြီး စကားတစ်ခွန်း၊ အကြည့်တစ်ချက်ကနေ စတင်ခဲ့တာပါ။ မမတို့မှာ Crush ကိုကိုတွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့ သူ့ကိုဘယ်လိုချဉ်းကပ်ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါဘီ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့…
အိမ်ထောင်ရှင်ရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင် မိသားစုကိစ္စတိုင်းက လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ဦးရဲ့တာဝန်က မိသားစုအတွက် ဝင်ငွေရှာဖို့အတွက်ပဲမဟုတ်သလို၊ အိမ်ရှင်မဆိုတာကလည်း အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ရုံနဲ့တင် သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုတည်ဆောက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။
ချစ်သူကောင်မလေးတွေကို လက်ဆောင်ပေးရာမှာ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ပန်း (၇) မျိုး
အဖြစ်အပျက်တွေက လွယ်လွယ်နဲ့ မေ့လို့ရပေမယ့် အမှတ်တရတွေကတော့ တစ်သက်တာမမေ့နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုတစ်သက်တာမမေ့နိုင်ဖို့အတွက်ကလည်း နှစ်သက်မြတ်နိုးမှုတွေနဲ့ ဆိုင်ပါသေးတယ်။ အမှတ်တရများစွာအတွက် ဘယ်တော့မှရိုးမသွားမယ့် နည်းလေးကတော့ ပန်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းပါပဲ။
ထူးခြားဆန်းပြား Single များ
တိုးတက်လာတဲ့ ၂၁ ရာစုခေတ်မှာ ရည်းစားတစ်ယောက်ရဖို့က အရမ်းကို လွယ်ကူပါတယ်။ ဒီလိုခေတ်မှာ တစ်ယောက်တည်း (Single) နေတဲ့သူတွေကို ရှားပါးလူသားတွေအဖြစ် သတ်မှတ်လို့ရပါတယ် 😛 အဲ့ဒီရှားပါးလူသား Single…
ဘာကြောင့် ခုချိန်ထိ Singal, FA ဖြစ်နေရသလဲ?
ခေါင်းစဉ်မြင်တာနဲ့ တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေပါပြီ။ ဘာလို့လည်းဆိုရင် ချစ်သူမရှိသေးတဲ့သူတွေကို ဘာကြောင့်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးတွေကို သိသလောက်မှတ်သလောက်လေး ဆရာလုပ်တယ်မဟုတ်ပဲ၊ ဝေဖန်ထောက်ပြတယ်လို့ သဘောထားပြီး ပြီးဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်ပါ။
Relationship တစ်ခုမှာ အမြဲအဆင်ပြေလွန်းနေရင်လည်း ဆားမပါတဲ့ဟင်းလိုပဲ ပေါ့ရွတ်ရွတ်ကြီးနော်။ တချို့ကောင်မလေးတွေက ချစ်သူကိုအချစ်စမ်းတဲ့အနေနဲ့ စိတ်ကောက်ချင်ကြပါတယ်။ အကြောင်းအရာထွေထွေထူးထူးမရှိပဲ စိတ်ကောက်တာက အခန့်မသင့်တော့ ရစ်မိသလိုဖြစ်တာပေါ့။ စိတ်ကောက်ရင်ချော့ရမှာက
ချစ်သူတွေကြား မလိုအပ်ပဲ ပြဿနာမဖြစ်စေဖို့ဆိုရင်
အချို့စုံတွဲတွေဟာ အမြဲလိုလိုအကြောင်းအရာမယ်မယ်ရရမရှိဘဲ ပြဿနာတွေ အမြဲဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ သူစိမ်းနှစ်ယောက်လက်တွဲချိန်မှာ မတူညီတာတွေ၊ အဆင်မပြေတာတွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ လက်တွဲသွားမယ်ဆိုရင် ရေရှည်မှာ သာယာဖြောင့်ဖြူးတဲ့အနေအထားကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒါဆိုချစ်ခရီးလမ်းတလျှောက်…
Gaming အတွက် Origin ရဲ့ အကြမ်းစားဖန်တီးမှု
Ronaldo, Van Dijk တို့ကို ကျော်ပြီး The Best Player Award ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ Messi
သီတင်းကျွတ် ပိတ်ရက်မှာ ဘယ်ဒိုးကြမလဲ
ဒီဇင်ဘာမှာ ထွက်လာဖို့ရှိနေတဲ့ Ip Man 4
ကိုရီးယားရုပ်ရှင်လောကရဲ့ Drama King
Blackpink က ကဝေမလေး Lisa